Windows 11 အကြံပြုချက်များ လှည့်ကွက်များသည် ဗီဒီယို သင်ခန်းစာများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လမ်းညွှန်ပေးသည်။
Windows 11 Tips Tricks Optimize Instructions Videos
Rise Media Player Windows 11 အသစ်ကို ထည့်သွင်းပါ။
ဖိုင်များနှင့် ဖိုင်တွဲများ၏ ဖန်တီးရက်စွဲကို ပြသပါ။
iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်ရှိ မူရင်းဘရောက်ဆာကို ပြောင်းပါ – ဤနေရာတွင် ပြုလုပ်နည်း
Windows 11 (ဗားရှင်းအဟောင်းများပင်) သည် ဖိုင်များနှင့် ဖိုင်တွဲများ၏ ဖန်တီးရက်စွဲကို ပြသနိုင်သည်။ အင်္ဂါရပ်သည် အသုံးဝင်ပါက၊ တစ်ခုခုဖန်တီးခဲ့သည့် ရက်စွဲကို ကြည့်ရှုရန် ၎င်းကို ဖွင့်ပါ။ Function ဘယ်လိုသုံးမလဲ...
Windows 11 တွင် ဝဘ်ရှာဖွေမှုကို ပိတ်ပါ - Bing ရှာဖွေမှုကို ပိတ်ပါ။
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows 11 တွင် Rise Media Player အသစ်ကို ထည့်သွင်းနည်းကို သင့်အား ပြသထားသည်။ Player ကို ဒီမှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါတယ်...
Windows 11 sandbox ကို Activate လုပ်ပါ
Microsoft Outlook သည် စာတိုက်ပုံးဒေတာကို Outlook ဒေတာဖိုင်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ အီးမေးလ်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ်အခြေခံ၍ Outlook သည် အော့ဖ်လိုင်းသိုလှောင်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဇယား (OST) ဖိုင်...
Redkey F10 သည် ကွေးနိုင်သော စုတ်ယူနိုင်သော ပြွန်တစ်ခုပါရှိသော ကြိုးမဲ့ ဖုန်စုပ်စက် (လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်) ဖြစ်သည်။ ဂျာမန်အိမ်ထောင်စုအများစုတွင် အိမ်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေစေရန် ပါကေး၊ ကော်ဇော၊ PVC သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက် ဖုန်စုပ်စက်တစ်ခုရှိသည်။ ...
Microsoft Modern Mobile Mouse စမ်းပြီးပါပြီ။
STRONG Wi-Fi ATRIA Mesh Home Kit 2100 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
WhatsApp အရန်သိမ်းခြင်းဆိုင်းငံ့ထားပါ - "အရန်သိမ်းရန်ပြင်ဆင်နေသည်" ဟူသောစာကိုပြင်ပါ။
သင် WhatsApp backup တစ်ခုဖန်တီးရန်ကြိုးစားသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒါကအကြောင်းရင်းများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ backup function သည်ဤအတွက် ...
WhatsApp: ယခု မှစ၍ ဓာတ်ပုံများကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ဓာတ်ပုံများပို့။ လက်ခံပါ
မှတ်တမ်းတင်ထားသော WhatsApp ချက်တင်များကိုချန်ထားပါ
Windows 11 တွင် မူရင်းဘရောက်ဆာကို သင်မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကို ဤနေရာတွင်ပြသပြီးနောက်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကို ပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
iPhone တွင် ဤဆက်တင်5ခုကို သင်ချက်ချင်း ပိတ်သင့်သည်။
နောက်ဆုံးတော့! သင့်တွင်ကွန်ပျူတာ၊ မှတ်စုစာအုပ် (သို့) PC ရှိသည် Windows ကို 11 ၀ ယ်သော်လည်း၎င်း၏ယခင်ကဲ့သို့ Windows ကို 10, Windows ကို 8 / 8.1, Windows ကို7Windows Vista (သို့) XP သည်လည်းနောက်ဆုံးပေါ် Microsoft operating system ကိုအစပိုင်း၌သင် ဦး တည်ရန်ခက်ခဲစေသောအပြောင်းအလဲများစွာပါ ၀ င်သည်။
windowspower.de အောက်ပါစာမျက်နှာများတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေသောအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များနှင့်အကြံဥာဏ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ဆောင်းပါးများနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့် PC အတွက် Windows ပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများ။ Windows 10 ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမင်းရဲ့ကွန်ပျူတာကိုပိုမြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာငါတို့ဆီကနေသင်ယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ hardware ဖြင့်လေ့လာပါ Tipps မင်းရဲ့ Windows ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးပိုလို့တောင်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ software လှည့်ကွက်တွေ။ အထူးသဖြင့် Windows 10 သည်သင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်သည့်အပလီကေးရှင်းအချို့ကိုပေးသည်။
Operating System ၏ user interface ကိုလုံး ၀ အသုံးပြုရပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ Windows 10 သည်၎င်း၏စနစ်လုံခြုံရေးနှင့်ထည့်သွင်းနည်းအသစ်များဖြင့်လည်းအထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။ ပါဝင်သောလျှောက်လွှာအချို့ကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည်။
ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးစနစ်ကလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိရင်အသုံးမ ၀ င်ပါဘူး။ ဒီမှာမင်းရပ်နေတယ် windowspower.de ဘက်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အသေးစိတ်ဆောင်းပါးများနှင့်သုံးပြီးသင်ပြပါလိမ့်မယ်
ဥပမာအားဖြင့် Windows 10 ရှိလုံခြုံရေးမက်ဆေ့ခ်ျများကိုမည်သို့ပိတ်ရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုညွှန်ကြားချက်များ Windows 10 ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ပါ. ဟုတ်ပါတယ်၊ သင် Windows 7, 8, Vista, XP နှင့်အခြားဗားရှင်းအဟောင်းများကဲ့သို့အခြား operating system များအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်ငါတို့ကမင်းရဲ့ Windows ကိုပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးလိမ့်မယ် ဆော့ဝဲလှည့်ကွက်များ ပေး။ ငါတို့သည်လည်းသင်၏ hardware အတွက်အမျိုးမျိုးသောအကြံပေးချက်များနှင့်အကူအညီများကိုစုစည်းထားသည်။ Windows အပြင် ညွှန်ကြားချက်ကွန်ပျူတာနှင့်နည်းပညာတို့နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးအကြောင်းအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးကိုချဲ့ထွင်ပြီးကမ်းလှမ်းမှုများလည်းရှိသည် ဗီဒီယိုကိုကျူတိုရီရယ် မှာ ငါတို့ရဲ့အကြည့်တစ်ချက် Youtube ချန်နယ် ဒါဟာကျိန်းသေထိုက်တန်ပါတယ်။
မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုလုံခြုံအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်းငါတို့ပေးပါတယ်။ သင့်ကွန်ပျူတာသည် malware (သို့) အခြားပိုးမွှားကူးစက်ခံရပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးအမျိုးအစားကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာသင့်တော်တာကိုတွေ့လိမ့်မယ် malware ဖယ်ရှားရန်လမ်းညွှန်ချက်များ
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံမျိုးစုံကို hardware များ၊ ဥပမာ B. တက်ဘလက်များနှင့်ဆော့ဝဲများကို၎င်းတို့အားရရှိစေပါ။ ထို့ပြင်မတူညီသောလိုင်စင်များကိုဆွတ်ခူးရမည့်ပြိုင်ပွဲများလည်းရှိတတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ Windows 11 အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းကောင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အသုံးဝင်သောညွှန်ကြားချက်များ၊ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ
4,59 EURအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ရော်ဘာ။ 1
22,85 EURအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ရော်ဘာ။ 3
Nero Platinum အကန့်အသတ်မရှိ 67,14 EUR
Windows ကို 10 629
Software များ 404
iPhone ကို 116
WhatsApp အတွက်နည်းလမ်းကောင်းများ 85
Windows ကို 11 45
Edge browser 24
ညွှန်ကြားချက်များ- Windows 11 ရှိ ဆက်စပ်မီနူးတွင် ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ထည့်ပါ။
ညွှန်ကြားချက်များ- Auto Dark Mode Windows 11
Firefox 96 အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလား။ ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။